Mari All Pasi – FX-Consultant
Sei mugotenga Financial Markets
Mibvunzo neMhinduro – Trading
Trade muna Financial Markets
Mari All Pasi
Mari yose uye Zvinhu Munyika unoratidzwa Physical $100 mari – Infographic
$100 – Most counterfeited mari sangano munyika. Yainyanya kushandiswa kuchengetera ukoshi munyika zvinodhaka. Anochengeta nyika ichifamba.
Gumi Thousand Dollars
$10,000 – Enough kuti zororo guru kana kuti kutenga motokari. Anenge gore rimwe basa nokuda avhareji yevanhu panyika.
$1,000,000 – ndiyo mari yaiungana pauriri.
Mazana Million Dollars
$100,000,000 – Plenty to go around for everyone. Zvinonyatsoenderana zvakanaka pamusoro ane ISO / Military mureza kadikidiki nhovo.
$1,000,000,000 – Uyu sei bhiriyoni emadhora sokunge. 10 pallets ose $100 mari.
$1,000,000,000,000 – Vakati kanda kumativi shoko “tiririyoni” akafanana hazvina, this is the realit of $1 tiririyoni madhora. The mativi ose pallets kurudyi riri $10 bhiriyoni madhora. 100X kuti uye une neshongwe $1 tiririyoni ndiko 465 akareba tsoka (142 mamita).
Gold uye Silver muri upfumi ose World
Demonocacy.info ave yakatsaurirwa nyaya dzose Gold uye vose Silver Munyika. Ichi muchidimbu duku shoma zvendarama nesirivha zvinowanikwa munyika inivhesitimendi zvinangwa. The anofungidzirwa ukoshi yose mubhizimisi Gold Munyika iri $2.5 Tiririyoni USD pa $ 40 / giremu kana $ 1250 / magiramu.
Pane zviri zvikuru sirivha munyika kupfuura goridhe, asi nekuti sirivha iri multiples isingadhuri kupfuura goridhe (zvishoma pane $ 20 / oz mu 2017), yakawanda yesirivha yaakawana rasika yose nguva. Silver rinoshandiswawo maindasitiri kugadzirwa. Huwandu mari yesirivha riwanikwe nevoruzhinji iri zvinoshamisa shoma. hurumende World havaregi chero zvinokosha reserves sirivha, kusiyana nendarama.
Makumi maviri nesere – $28 Tiririyoni muna Base Money
Makumi mashanu – $50 Tiririyoni muna Bank Money
Ndiwo sei mari yakawanda iri nyika. Hazvisi zvose panyama mari zvazvo (sezviri kuratidzwa pamusoro), yakawanda iri-digital:
Base Money ine mari dzaidzidziswa nemabhangi (kubva zvavo Central Banks apo Banks akatengesa Government kana Corporate zvisungo zvavo Central Banks, mari iri kuwanikwa anomukweretesa kune private zvekutepfenyura), mari inochengetwa mubhangi kuti hwakavigwa mumakamuri (panyama mari) uye mari mumaoko dzevanhu. mari iyi haisi kuwanikwa panguva ATM.
Bank Money une mari inochengetwa nemabhangi Makambani uye vanhu, dziripo caffeine chero nguva. Bank Money is also lent out by Banks to people and business’. Banks vane mashoma chengetedza chinodiwa (kazhinji 10%) kuti vanofanira kuramba ruoko. Kana wose vakasarudza kuenda ATM ndikadzura zvose, paizova run pamahombekombe.
makumi mashanu nevasere $58 tiririyoni – Kukosha Government Bonds Vose vari World
Vagari venyika kubhadhara yechimbadzo ichi mari zvikuru nokuda kwechikwereti vakasikwa nyika hurumende yavo.
hurumende Bonds (chikwereti) anonzi ane “twa kirasi” nekuti Bonds (mutero payers) kubhadhara yechimbadzo vakakwereta mari. Akakweretesa anowana gwaro (The Bond- chipikirwa kubhadhara $$$ shure + mubereko) mu kudzokera.
Kazhinji Hurumende Bonds vanoonekwa yakachengeteka upfumi pamwe shoma mukana asiri mubhadharo nokuti Hurumende inogona kunyora mitemo mitsva (wedzera & sika Involuntary Mitero) kutora mari vanhu nechisimba (mu rinorema mazwi: inonyoreswa ugororo). Munogonawo kunenge kubhadhara kuti hazvina kudaro zvakanaka kune makambani / Lenders ndiko kuva Federal Reserve “dhinda” mari itsva, ichi devalues ​​ari rokutenga simba mari kuburikidza mitengo uye vanoita paanodzoka zvishoma pane vakaaviga. Kazhinji ichi ndicho nzira sarudzo hurumende.
Sei zvakadaro Government Debt? Nekuti enyika pamusoro-vimbiso kune vagari zvavanokwanisa (NOT) kununura, vanoita saizvozvo kuhwina sarudzo. Kamwe Politicans kukunda ivo kukwereta mari kubhadhara zvipikirwa zvavo kuitira kuchengeta zvivimbiso. Kazhinji kwereta kuti vazvipfumise ravo crony vadyidzani mune mhosva.
One mazana gumi $116 tiririyoni – All mumatanda uye Corporate Bonds Munyika
Corporate Bonds akafanana Hurumende Bonds, asi zvikuru kuvadza. Makambani makuru akawanda kutakura kure zvishoma ngozi pane kukweretesa mari vanhu– chokwadi ichi lowers pangozi uye anodzinga pasi neanokweretesa mubereko prices. Big makambani anogona kukwereta mari nokururamisira zvakachipa zvichienzaniswa voga vanhu. Dzimwe nguva Makambani kwereta mari kutenga musana padanda ravo uye vanosundira wemari ukoshi kumusoro, Saizvozvo huchiita kuti vanoita apo nemari gutting wekambani.
Mumatanda anochinja-chinja zvikuru ukoshi, nekuti mutengo wavo zvikuru chaihwoihwo- kukosha ndezvipi P / E (Price kune zvakaoma) reshiyo uye yokufungidzira wemari dividend kubhadhara.
mazana maviri mapfumbamwe $290 tiririyoni – Kukosha zvose Private Business uye Real Estate Munyika
Kana angada kutenga yose nyika, ndiwo sei mari yakawanda ungada.
$180 Tiririyoni nokuda Real Estate
$100 Tiririyoni nokuda akanyoreswa Private Business
$10 Tiririyoni nokuda Extralegal masangano.
Izvi murwi chaicho mari iri azvipiwa pachake uye pasiri zvebhizimisi kuburikidza Capitalism.
Democratic Capitalism ichaongororwa kuti yakaipisisa zvoupfumi vasati Tikatarisa emamwe. Democratic Capitalism was promoted by the Founding Fathers of USA. Vamwe vakatanga Heroes, Zvichakadaro vamwe vanovati “Nevaranda vakanga vasingadi kubhadhara mutero muUK”. Choice ndeyako.
Corporate Capitalism ichaongororwa kuti chikuru wemuTesitamende United States parizvino.
YechiKomonisiti hurumende kuti vabate kudzora mari zvose izvi (Business uye Real Estate) pahwaro kuti hurumende anoziva nani kupfuura imi apo mari mari yako, and the government would run all business and own all real estate.
Mugwagwa kugehena anogara rwakagadzirira nevavariro dzakanaka. A fool who thinks he knows is much more dangerous than a fool that knows he knows nothing.
Poshi $1 Quadrillion – Kukosha Dérivés ose World
Izvi zvinoratidza zvachose notional kukosha ose Dérivés Munyika (Casino Style vachibhejera zvinhu mu chibvumirano muchimiro, kwakaitwa mabhanga). Dérivés muri nyangarara ngozi. Vane zvekufungidzira asi kwasara chaicho. Dérivés vari kasino Style vachibhejera zvinhu pamusoro kukosha chero ivo vanosarudza bheji pamusoro, mu chibvumirano muchimiro, kwakaitwa mabhanga, kutungamirira nemunhu (nekuti hakuna anonzwisisa zvakajeka zvakanyatsobatana padandemutande & nyangarara pamusoro Dérivés).
Nhonga “chinhu” chinokosha, kuti vachibhejera zvinhu pamusoro yemberi kukosha “chinhu”, wedzera chibvumirano & une rinobva. Banks kuti wandisa mari pamusoro nomukaka, uye kana sefuro watsemuka mikana ndivo taxpayer achaguma bhiri. Izvi visualizes zvachose nhau kuti nomukaka (notional). Yakafanana kambani inishuwarenzi kwakazara nhau kuti motokari zvose (hazvirevi inishuwarenzi zvose pamusoro motokari zvose zvichava kubhadharwa kubva panguva imwe chete).
Dzimwe nguva Banks kuti kuzvipira hwekubvisa rinobva zvibvumirano. muenzaniso: 2X Banks vanopinda 2x zvibvumirano:
Contract1 = Bank1 inobhadhara $ 10M kuna Bank2 kana mutengo inokwira
Contract2 = Bank2 inobhadhara $ 10M kuna Bank1 kana mutengo inokwira.
Izvi 1000x zvino vanoenda vhaira kune mumwe pamusoro kukura kwavo rinobva Portfolio.
Hapana anogona zvechokwadi chamber anotora chikwereti chii kuna ani pane Dérivés, zviri yakakura dzinovhiringidza nyangarara, asi chiitiko unannounced akadai Fed Chairwoman Janet Yellen pakarepo vachisimudza chimbadzo kune 5% ingangokuudza chaizvo implode yose rinobva System uye Banks pamwe kuti, nekuti cascading Domino kushanda uye vamwe kubhengi zvichida aizova ruoko akaipa pamusoro rinobva vachibhejera zvinhu uende kusauka.
vamwe benzi (pamwe rimwe bhengi) kuti varidzi kusauka pamahombekombe wacho mumatanda uye unhu, uye vanotarisanawo kusauka. Izvi zvaizoita kuti kurasikirwa chivimbo nemabhengi vose yaizotanga kudhonza mari yavo yakachena-vakuchengete nayo, kukonzera cascading mugumisiro Bank insolvency.
$1 Quadrillion = $1000 dzakazadza = $1 Million Mabhiriyoni kana $1 bhiriyoni Mamiriyoni
The Liquidity Pyramid vakasikirwa kuedza kufungidzira sangano twa nemakirasi maererano pangozi uye kukura. The Liquidity Pyramid akasikwa panguva mu United States, apo mumwe dhora yakanga kunotsigirwa Gold. Gold anoumba duku nehwaro vakawanda yakavimbika ukoshi, uye twa makirasi pamusoro zvishoma yepamusoro nhanho zvakawanda ngozi. The hombe Ukuru twa nemakirasi pa dzakakwirira nhanho ndiye mumiririri rokumusoro zvachose pose notional kukosha avo zvinhu.
Sezvo mari kunowedzera njodzi, mari kunoita kuti kufamba kubva zvikuru ngozi zvinhu (Dérivés), kuvaduku ngozi zvinhu (kuti mumuviri mari uye ipapo goridhe). Hapana pasina mukana, asi ngozi ihama. Nyaya ndeyokuti pane zviduku panyama mari uye kunyange zvishoma Gold zvichienzaniswa zvikuru ngozi zvinhu, ichi kunoita kuti yakazara yokutengesera panguva dzakakwirira ngozi apo munhu wose anoda kusvetukira mari uye goridhe, kungoita kukwira mutengo.
The duku yero rectangle kuruboshwe pamberi zvose nendarama munyika muviri. Ndarama yose munyika iri NOT zvose zviri “zvemari inivhesitimendi giredha” fomu.
The $1 Quadrillion Dérivés mari rusvingo rinosvava kure, nekuti $1 Quadrillion ndiye uchimutarira yakanakisisa vaongorori uye chokwadi hapana anonyatsoziva wechokwadi ukuru Dérivés Market.
Zvakakwana chepakutanga Chirungu pano: demonocracy.info
User kutungamirira nokuti beginners mu Forex wokutengesera
Mhando Binary Options